ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှ ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ပွဲထွက်စာရင်း မှာ အံ့သြဖွယ် အပြောင်းအလဲ အချို့ မြင်ခဲ့ရပြီး ၊ ကစားသမားစာရင်းမှာလည်း ဒဏ်ရာ တစုံတရာ မရှိပဲ အကောင်းပကတိ အတိုင်း ရှိနေတဲ့ ဒိန်းမတ် လက်ရွေးစင် ခံစစ်မှူး အန်ဒရီယာစ် ခရစ်တန်ဆန်လည်း မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး ။ ခရစ်တန်ဆန် ဟာ …
အာဆင်နယ် အသင်း ကွင်းလယ်လူ ဂရန်းနစ် ရှာကာ ရဲ့ နယူးကာဆယ် နဲ့ ပွဲအပြီး ပြောစကားဟာ ဘောလုံး ပရိသတ်တွေကြား အတော်လေး ဟိုလေးတစ်ကျော် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ နယူးကာဆယ် ကို ၂ ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲအပြီး အင်တာဗျူးမှာ ဂရန်းနစ် ရှာကာ ဟာ အသင်းအတွက် ကစားပေးဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်ရင် …
ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီမှာ လူမခေါ်ခဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေတဲ့ အပေါ် တုန့်ပြန် ပြောကြားလိုက်တဲ့ အာတေတာ
အာဆင်နယ် အသင်း နည်းပြ မီခေးလ အာတေတာ က ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ ကစားသမားသစ် မခေါ်ယူ ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေတဲ့ အ​ပေါ် နယူးကာဆယ် နဲ့ ပွဲအပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ တုန့်ပြန် ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီမှာ အူဘာမီယန်း …
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား နဲ့ အကောင်းဆုံး လူငယ်ကစားသမား တို့ကို ရွေးချယ်ပေးသွားခဲ့တဲ့ ကာရေဂါ နဲ့ ဂယ်ရီနဗီး
ဂျေမီကာရေဂါနဲ့ ဂယ်ရီနဗီး တို့ဟာ မနေ့ညက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Monday Night Football အစီအစဉ်မှာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား နဲ့ အကောင်းဆုံး လူငယ် ကစားသမား တို့ကို ရွေးချယ်ပေးသွားခဲ့ ပါတယ်။ စကိုင်းစပေါ့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုမှာ အံ့အားသင့်စရာ ကတော့ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ သွင်းဂိုး ၂၂ ဂိုး …
ဒီကလန် ရိုက်စ်ကို ခေါ်ယူရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တန်ဟတ်ကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ကလီဘာဆန်
ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကလီဘာဆန် က အသင်းကို တည်ဆောက်ရေးမှာ အရေးပါသူ တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်မှသာ ဒီကလန် ရိုက်စ် ကို ခေါ်ယူရေး အတွက် ပေါင်သန်း 100 လောက် သုံးစွဲသင့်ကြောင်း တန်ဟတ်ကို သတိပေးသွားခဲ့လိုက်ပါတယ် ။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ဒီနွေမှာ ကွင်းလယ်လူ နှစ်ဦး ဖြစ်ကြတဲ့ ပေါလ် …
ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျ ကတိတခု ဖောက်ဖျက်နိုင်ကြောင်း ဗြိတိန်အစိုးရမှ သံသယ ရှိနေခြင်းကြောင့် ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ပိုင်ရှင်သစ် အလွှဲအပြောင်း ပြီးစီးဖို့ မသေချာနေ
တော့ဒ်ဘိုလီ ဦးဆောင်တဲ့ အမေရိကန် စီးပွားရေး ရှယ်ယာစု ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ခန့်ကမှ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို ပေါင် ၂.၅ ဘီလီယံနဲ့ ဝယ်ယူလိုက်ကြောင်း ကလပ် တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် ၊ ကလပ် အလွှဲအပြောင်း က တရားသဘောအရ ရာနှုန်းပြည့် မပြီးစီးသေးပဲ ရှိနေပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂လလောက်က …
ပရီးမီးယားလိဂ် ဗိုလ်စွဲဖို့ လီဗာပူး မှာ လုံး၀ အခွင့်အရေး မရှိတော့ပါဘူး #ပေါလ် မာဆွန်
May 17, 2022 May 17, 2022 - by Editor
မန်စီးတီး ဟာ ဝက်စ်ဟမ်း နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ အဝေးကွင်း ပွဲစဉ်မှာ မထင်မှတ်ပဲ သရေ ရလာဒ် ထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့် လီဗာပူး ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ မျှော်လင့်ချက်ဟာ ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိတော့တဲ့ အနေအထား ကနေ ၊ အလှည့်အပြောင်း တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီညမှာ ကစားမယ့် ဆောက်သမ်တန် နဲ့ ပွဲကိုသာ …
ဖာဘင်ညိုရဲ့ ဒဏ်ရာအခြေအနေ နဲ့ ဆောက်သမ်တန်နဲ့ ပွဲစဉ်အတွက် လီဗာပူးအသင်းရဲ့ line-up အစီအစဉ်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့
ယာဂန်ကလော့က ဆောက်သမ်တန်နဲ့ ကစားရမယ့် လီဗာပူးရဲ့ ပွဲစဉ် အတွက် သူ့ရဲ့ line-up ကို မစဉ်းစားမီ သူ့ကစားသမားတွေရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု အခြေအနေကို အကဲဖြတ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ချဲလ်ဆီးကို အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အက်ဖ်အေဖလားဖိုင်နယ်မှာ အချိန်ပို ပင်နယ်တီထိ ကန်ခဲ့ရပြီးနောက် ၃ ရက် အကြာမှာပဲ လီဗာပူးဟာ ဆောက်သမ်တန်ကို …
အာဆင်နယ် သာ အလိုရှိရင် အသင်းမှာ ဆက်ကစားသွားမယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်တဲ့ အယ်နီနီ
အာဆင်နယ် အသင်း ကွင်းလယ်လူ မိုဟာမက် အယ်နီနီ က လာမယ့် နွေရာသီမှာလည်း မြောက်လန်ဒန် ကလပ်မှာပဲ ဆက်လက် ကစားဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား လိုက်ပါတယ် ။ အယ်နီနီ ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ဆွစ်ဇာလန် ကလပ် ဘေဆယ် အသင်းကနေ အာဆင်နယ် အသင်းကို ရောက်ရှိလာသူ …
အဲဗာတန် လိဒ်ယူနိုက်တက် ဘန်လေ?? ပရီးမီးယားလိဂ် ကနေ ဘယ်အသင်း တန်းဆင်းသွားရမှာလဲ?
ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီရဲ့ နောက်ဆုံး ရက်သတ္တပတ်ကို ဦးတည်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဒီပြိုင်ပွဲကနေ တန်းမဆင်းရဖို့ အတွက် တိုက်ပွဲ၀င်နေမှုဟာ အရင်ကထက် ပိုမို ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ အဆင့် ၁၆ နေရာက အဲဗာတန် နဲ့ အဆင့် ၁၈ နေရာက ဘန်လေ တို့ကြား ရမှတ် ၂ မှတ်သာ ကွာဟမှု ရှိပြီး လိဒ်ယူနိုက်တက်ဟာ အဆိုပါ …
အက်ဖ်အေဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ ခရစ်တန်ဆန် ဘာကြောင့် ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ကစားသမား စာရင်းမှာ မပါဝင်ခဲ့တာလဲ ?
တမြန်နေ့ည က ဝင်ဘလေကွင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ လီဗာပူး အသင်းဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်မှာ ၆ – ၅ ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရကာ ၊ ၁၀စုနှစ် ၂ခုနီးပါး ဝေးကွာနေခဲ့တဲ့ ယင်းပြည်တွင်းဖလားကို တကျော့ပြန် ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ လီဗာပူး ဟာ ထိုပွဲမှာ အားထားရတဲ့ …